Somaliland.Org » Daahirow Dalka u tali… Niyadsami Ku daadihi… Weligaa ha siidayn … illeyn waad dedaashoo….Dayac waad ka dhowrtee!!!!!
OPINIONDaahirow Dalka u tali… Niyadsami Ku daadihi… Weligaa ha siidayn … illeyn waad dedaashoo….Dayac waad ka dhowrtee!!!!!
May 30th, 2008 Comments Off Waxaa isu kay qaban waayey; Hanjabaadda Xisbiyada Mucaaradka iyo wax la’aanta ay ka keenaan wada hadalada iyaga iy Xukuumadda. Waxaa isu kay qaban waayey; Mucaaradkan qoslaya iyo hangool ruxooda iyo Tabco gudeedka Xukuumaddu la damacsantahay. Waxaa kaloo isu kay qaban waay mucaarad baan ahay, haddana waxaan u doodaa Muxaafadka iyo Xukuumadda?
Beryahan dambe isyeel-yeelka iyo ismaalaakadeedka dalka ka jira waxa weeye in wixii siyaasadda ka khaldamaba dusha laga saaro Mudane Daahir Rayaale. Waar daahir Rayaale fara badana! Waar Daahir Rayaale awooddiisu fara badana ! Waar caqliga Daahir Rayaale mooyaan e miyaan caqli kale dalka ka jirin! Waar Daahir Rayaale mooyaan e miyaan dalka cid kaleba ku wehelin! Waar Dalka miyaan Distoor iyo shuruuci ka jirin! Waar Dalka miyaan Laba Gole Jirin! Waar dalku miyaanu lahayn Xisbiyo mucaarad iyo taageerayaal ! Waar Dalku miyaanu Aqoon-yahan lahayn! Waar Shicibkii Xilka Xukuumadda u igmaday meeyey! Waar Boqoradii , salaadiintii, Cuqaashii iyo